Yintoni esinokuyilindela kumsitho we-Epreli 20 | Ndisuka mac
Yintoni esinokuyilindela kumsitho we-Epreli 20
UManuel Alonso | | Amahemuhemu
Izolo kubhengezwe ngokusesikweni ukuba iApple izakuveza elandelayo Epreli 20 kumsitho omtsha izixhobo ezahlukeneyo. Umbuzo wesigidi seedola kukwazi ukuba zeziphi eziza kuzisa? Ngaba ekugqibeleni siza kubona ii-AirTags? Ngaba siya kuba neMac entsha kunye neApple Silicon? Kudala sibona amarhe awahlukeneyo malunga nento esinokuyibona kulo msitho, kodwa Siyayiqokelela kolu ngeno ke akufuneki ukhangele kakhulu.
I-Apple iqala ngokuqaliswa kwemveliso yayo yonyaka ngokusungulwa kwakhon imveliso entwasahlobo, kwaye 2021 isenokungabi njalo. Siqinisekile ukuba sinakho ukuboniswa kwesixhobo / izixhobo esitsha ukuqala i-2021 kunyawo lwasekunene. I-iPad Pro, ii-AirTags, iMac ... zininzi izithembiso okanye mandithi amarhe avele unyaka wonke kwaye achongwa ngakumbi kwiinyanga ezidlulileyo.
Okulandelayo Epreli 20 ukusuka eApple Park Kwaye kwinto eya kubakho kwakhona, isiganeko esibonakalayo, siya kushiya amathandabuzo malunga ne-Apple eya kuba nakho ukubonisa. Kodwa sishwankathela apha into esinokuyibona:
1 Ekugqibeleni sinokubona ii-AirTags
2 Intsha ye-Apple TV okanye kude okude kumabonwakude
3 IPad Pro entsha ene-miniLED, i-iPad mini kunye nePensile entsha ye-Apple
4 IMac ye-intshi ezingama-24
5 Ii-AirPods 3, iMac Pro mini kunye neMac Pro
Ekugqibeleni sinokubona ii-AirTags
Andazi ukuba sithethe kangaphi ii-AirTag ezidumileyo. Kwakhona ukuba nomsitho ozayo we-Apple, kucingelwa ukuba inkampani iyakuyikhupha kwikhabethe lezithembiso zokubenza zifumaneke kubasebenzisi. Ezo iilebheli ezisebenza ukukhangela ezo zinto zilahlekileyo apho sidibanise enye yezi. Izitshixo, i-iPhone, i-iPad, iMac, nokuba yeyiphi na, sinokuzibona nje ukuba zikwindawo engaphakathi isenzo seBluetooth. Ke ayisiyiyo esona sisombululo sokufumana ezona zinto zibaluleke kakhulu. Ithayile sele ithathe iApple kwezi zinto kwaye ngokuqinisekileyo impikiswano eqale ngazo iya kuqhubeka.
Ndiyathemba ukuba ndiyaphazama, kodwa Kubonakala kum ukuba siza kuhlala silindile
Sihlaziya ungeniso, enkosi kulwazi olunikezwe ngomnye wabafundi bethu. Enkosi kakhulu kwiCage:
"Enye yezona zinto zintsha zithandwayo -ukuba umahluko weTile kukuba ii-AirTags kukuba zibekwe ngaphandle kweBluetooth, kuba ziya kunxibelelana ngasese nayo nayiphi na i-iPhone ekufutshane. Inethiwekhi enkulu kakhulu kunokuba iTile inokuba nayo. Ngale nethiwekhi ungasifumana isixhobo, okanye, ukuba sicinyiwe, indawo yokugqibela ekuyo. Oko, ngaphandle kwento entsha ye-U1 chip eya kukunika iindawo ezichanekileyo. "
Intsha ye-Apple TV okanye kude okude kumabonwakude
Kukwacingelwa ukuba iApple ithathela ingqalelo imeko yokudala ifayile ye- izixhobo zekhompyutha ezintsha ezinxulumene neApple TV. Amava amatsha anokuba nezinto ezinobuchule ngakumbi. Sithetha ngolawulo olutsha olukude kumabonwakude oluya konwaba abasebenzisi. Ngaphandle kwamathandabuzo iyakuba luhlaziyo olulindelweyo kuba kudala sisebenzisa izixhobo ezifanayo kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ukuba iApple ifuna ukukhuthaza i-Apple TV + inokuhlaziya izixhobo kwaye ibe nomtsalane ngakumbi kubasebenzisi.
IPad Pro entsha ene-miniLED, i-iPad mini kunye nePensile entsha ye-Apple
Eli lelinye lamahemuhemu amatsha. Ingayinto yokuba iApple ibisele inayo IP Pro entsha ngezikrini ezincinci ze-miniLEde kuya kubakho ukuthetha ukuba izakuzisa ipensile entsha ye-Apple. Ipensile entsha enetekhnoloji ethe kratya kwaye nangaphezulu kokuchaneka ngakumbi, ngemisebenzi yokuchukumisa entsha nangaphezulu kwako konke ukuzimela okungakumbi.
I-2020 iPad Pro ifike kwintengiso ekupheleni kuka-Matshi kwaye kulindeleke ukuba sibe nePad Pro entsha kule ntetho ekupheleni kuka-Epreli. Ngeso sikrini se-miniLED Uya kuzuza kwisisombululo, umgangatho wekrini kwaye ngaphezu kwako konke ukusebenza kwebhetri. Ingxaki kukuba ababoneleli banengxaki yokubonelela ngoko ke kuya kubakho nge-2 ka-Epreli kodwa ayizukuthengisa ngokukhawuleza njengoko besingathanda.
Kunye ne-IP Pro kuza kuza isizukulwana esitsha se- IPad encinci. I-iPad oyibambe nkqi kwaye ongafuni ukuyinyamalala kukuba bubungakanani obufanelekileyo bokuxhasa iPro okanye iMac.Ndiyathanda ukukwazi ukuyithatha naphina kwaye ndibhale kuyo. U-Lugo uqhubeke nokusebenza kwi-Mac.Kwakulungile ukuba nakho ukufunda kuyo. Igqibelele ngandlela zonke. Imodeli entsha ayinakwahluka kakhulu kunangaphambili ngaphandle kwe-chip engcono kunye nesisombululo esingcono.
Ndizama ukutsho ukuba iApple iyikhuphe, iya kudibana nePensile 2 ka-Apple kuba ipensile entsha iya kuya kwiPad Pro.
IMac ye-intshi ezingama-24
Siza nokuba yintoni i-jackpot yokupapashwa kweso siganeko. A iMac entsha ye-24-intshi kunye neApple Silicon. Ilahlekile kwaye amahemuhemu anzima kakhulu kwaye anomdla. Sifuna iMac entsha, sidinga iMac entsha ngeApple Silicon. I-Apple inyanzelekile ukuba iyivule.
Ii-AirPods 3, iMac Pro mini kunye neMac Pro
Kukho amarhe malunga nezi zinto zintathu. Kodwa kufuneka sitsho ukuba asikholelwa konke konke ukuba ziya kuveliswa. Ngapha koko, ndicinga nje ukuba kukho into abaya kuyenza ii-AirPods 3 kwaye azisayi kubakho kude kube ukuwa kwalo nyaka.
.- iPad Pro
.- iPad mini
I-iMac ene-intshi ezingama-24 kunye neApple silicon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Yintoni esinokuyilindela kumsitho we-Epreli 20
Enye yezona zinto zintsha zintsha-ukuba umahluko weTile-kukuba ii-AirTag kukuba zifumaneka ngaphandle kweBluetooth, kuba ziya kunxibelelana ngasese nayo nayiphi na i-iPhone ekufutshane. Inethiwekhi enkulu kakhulu kunokuba iTile inokuba nayo. Ngale nethiwekhi ungasifumana isixhobo, okanye, ukuba sicinyiwe, indawo yokugqibela ekuyo. Oko, ngaphandle kwento entsha ye-U1 chip eya kukunika iindawo ezichanekileyo.
UManuel Alonso sitsho
Enkosi. Ndihlaziye ungeniso ngolwazi lwakho olutsha
Phendula uManuel Alonso
I-Adobe Premiere Rush ngoku iyahambelana ngokupheleleyo neM1 ye-Apple
Zonke iivenkile zaseApple zase-UK ngoku zivulekile